Mootummaan Sa'udii "Iiraan weerara nu irratti geggeessaa jirti" jedhe. - NuuralHudaa
Mootummaan Sa’udii "Iiraan weerara nu irratti geggeessaa jirti" jedhe.
Mootummaan Iiraan immoo nuti hidhattoota Huusiif deggarsa hin gone jechuun mormaa jiru. Ministeerri dhiimma alaa Iiraan Muhammad Jaavaad Zaariif ibsa guyya kaleessa midiyaaleef kenneen, “weerarri Sa’udiin geggeessaa jirtu naannichi akka hin tasgabboofne dhorkee jiraa” jedhe. Midiyaan hidhattoota Husii tokko Misaayila Buurkaan jedhamu Buufata Xiyyaara Idil Addunyaa Riyaaditti argamu Haleeluuf kan furguggeefame tahuu gabaase. Mootummaan Sa’udii immoo Misaayilii Hidhattoota Huusii irraa darbame kun, buufaticha osoo hin gahin kan ofirraa deebise tahuu fi Misaayili kun kan Iiraanii tahuu amanee jira.
October 24, 2021 sa;aa 6:25 pm Update tahe